Numeri 31 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
31 Wathetha uYehova kuMoses esithi: 2 “Baphindezelele+ oonyana bakaSirayeli kumaMidiyan.+ Emva koko wohlanganiselwa ebantwini bakowenu.”+ 3 Ngoko wathetha uMoses ebantwini, esithi: “Xhobisani amadoda phakathi kwenu aphume umkhosi, aye kwaMidiyan aze aphumeze impindezelo kaYehova kwiMidiyan.+ 4 Nize nithumele emkhosini iwaka esizweni ngasinye kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli.” 5 Kwakhutshwa ke emawakeni+ akwaSirayeli iwaka esizweni, alishumi elinesibini amawaka exhobele umkhosi.+ 6 Wawathuma uMoses, iwaka esizweni ngasinye, ukuya emkhosini, wona enoFinehasi+ unyana kaEleyazare umbingeleli, eneempahla ezingcwele namaxilongo+ okuhlaba umkhosi esandleni sakhe. 7 Balwa imfazwe neMidiyan, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses, baza bayibulala yonke into eyindoda.+ 8 Bababulala ookumkani bakwaMidiyan ndawonye nabanye ababulawayo, oko kukuthi, uEvi noRekem noTsure noHure noRebha, ookumkani abahlanu bakwaMidiyan;+ noBhileham+ unyana kaBhehore bambulala ngekrele. 9 Kodwa oonyana bakaSirayeli babathimba abafazi bakwaMidiyan nabantwana babo;+ kwanezilwanyana zabo zasekhaya zonke nemfuyo yabo yonke nobuncwane babo bonke babuphanga. 10 Ke zona izixeko zabo zonke ababehlala kuzo neenkampu zabo zonke ezibiyelweyo bazitshisa ngomlilo.+ 11 Bawathabatha onke amaxhoba+ nako konke okuthinjiweyo ebantwini nasezilwanyaneni zasekhaya. 12 Bakuzisa okuthinjiweyo namaxhoba kuMoses nakuEleyazare umbingeleli nakwindibano yoonyana bakaSirayeli enkampini, emathafeni aziinkqantosi akwaMowabhi,+ angaseYordan eYeriko. 13 Waphuma uMoses noEleyazare umbingeleli nezikhulu zonke zendibano baya kubahlangabeza ngaphandle kwenkampu. 14 Waza wacaphuka uMoses ngenxa yamadoda amiselweyo ayo imikhosi yokulwa,+ iintloko zamawaka neentloko zamakhulu ezazivela kwiphulo lomkhosi. 15 Ngoko wathi uMoses kuzo: “Niwasindisile na onke amabhinqa?+ 16 Khangelani! Ngawo la athi, ngelizwi likaBhileham, aqhubela oonyana bakaSirayeli ekungathembekini+ kuYehova ngoko kwenzekayo ePehore,+ kwaza kwabakho isibetho kwindibano kaYehova.+ 17 Ngoko ke bulalani yonke into eyindoda phakathi kwabantwana, nize nibulale kwanto elibhinqa eye yalala nendoda yaza yaba neentlobano zokwazana nayo.+ 18 Onke wona amabhinqa aselula angalalanga nandoda zisindiseleni wona.+ 19 Ke nina, misani iinkampu ngaphandle kweminquba iintsuku ezisixhenxe. Wonk’ ubani obulele umphefumlo+ naye wonk’ ubani ochukumise obuleweyo,+ nifanele nizisulungekise+ ngomhla wesithathu nangomhla wesixhenxe, nina nabo nibathimbileyo. 20 Nezambatho zonke nempahla yonke yesikhumba nento yonke eyenziwe ngoboya bebhokhwe nempahla yonke yomthi nifanele nizisulungekisele zona esonweni.”+ 21 Wathi uEleyazare umbingeleli kumadoda omkhosi awayeye edabini: “Nguwo lo ummiselo womthetho uYehova amyalele wona uMoses, 22 ‘Kuphela yigolide nesilivere nobhedu nentsimbi nenkcenkce nelote, 23 yonke into edluliswa emlilweni,+ enimele niyidlulise emlilweni, ize ihlambuluke ke. Kuphela nje ifanele isulungekiswe ngamanzi okuhlambulula.+ Ke yonke into engadluliswayo emlilweni noyidlulisa emanzini.+ 24 Yaye nimele nihlambe izambatho zenu ngomhla wesixhenxe, nohlambuluka ke, yaye emva koko ningangena enkampini.’”+ 25 Waqhubeka wathi uYehova kuMoses: 26 “Bala inani lamaxhoba athinjiweyo, awabantu nawezilwanyana zasekhaya, wena noEleyazare umbingeleli neentloko zooyise bendibano. 27 Uze ukwahlule kubini oko kuthinjiweyo phakathi kwabo baye baphuma iphulo ukuze babe nenxaxheba edabini, kunye nenxalenye eseleyo yendibano.+ 28 Yaye kuwo amadoda emfazwe aphume iphulo uze uthabathe umphefumlo ube mnye kwengamakhulu amahlanu, ebantwini nasemhlambini weenkomo nasemaesileni nasemhlambini weegusha, kuze oko kube yirhafu+ kaYehova. 29 Nize niyithabathe esiqingatheni sabo, niyinike uEleyazare umbingeleli, ibe ngumnikelo kaYehova.+ 30 Yaye esiqingatheni soonyana bakaSirayeli wothabatha ibe nye emashumini amahlanu, ebantwini, nasemhlambini weenkomo, nasemaesileni, nasemhlambini weegusha, nakuhlobo lonke lwesilwanyana sasekhaya, uzinike abaLevi,+ abagcine imbopheleleko yabo emnqubeni kaYehova.”+ 31 Wenza ke uMoses noEleyazare umbingeleli kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 32 Ke okuthinjiweyo, okuseleyo koko babekuphangile abantu ababesephulweni, kwaba ngamakhulu amathandathu anamashumi asixhenxe anesihlanu amawaka omhlambi weegusha, 33 namashumi asixhenxe anesibini amawaka omhlambi weenkomo, 34 namashumi amathandathu ananye amawaka amaesile. 35 Yona imiphefumlo yabantu+ kuwo amabhinqa angalalanga nandoda,+ yaba yimiphefumlo engamashumi amathathu anesibini amawaka iyonke. 36 Yaye inani lesiqingatha esaba sisabelo sabo babesephulweni laba ngamakhulu amathathu anamashumi amathathu anesixhenxe amawaka anamakhulu mahlanu emhlambini weegusha. 37 Irhafu+ kaYehova emhlambini weegusha yaba ngamakhulu amathandathu anamashumi asixhenxe anesihlanu. 38 Imihlambi yeenkomo yaba ngamashumi amathathu anesithandathu amawaka, yaye irhafu kaYehova kuyo yaba ngamashumi asixhenxe anesibini. 39 Amaesile aba ngamashumi amathathu amawaka anamakhulu mahlanu, yaye irhafu kaYehova kuwo yaba ngamashumi amathandathu ananye. 40 Imiphefumlo yabantu yaba lishumi elinesithandathu lamawaka, yaye irhafu kaYehova kuyo yaba ngamashumi amathathu anesibini emiphefumlo. 41 Wandula ke uMoses wayinika uEleyazare umbingeleli+ irhafu leyo yaba ngumnikelo kaYehova, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.+ 42 Kwaba njalo nangesiqingatha soonyana bakaSirayeli, awasahlukanisayo uMoses kweso samadoda awayelwe emfazweni: 43 Sona ke isiqingatha sendibano emhlambini weegusha saba ngamakhulu amathathu anamashumi amathathu anesixhenxe amawaka anamakhulu mahlanu, 44 umhlambi weenkomo waba ngamashumi amathathu anesithandathu amawaka, 45 amaesile aba ngamashumi amathathu amawaka anamakhulu mahlanu, 46 imiphefumlo yabantu yaba lishumi elinesithandathu lamawaka. 47 Wandula ke uMoses wathabatha esiqingatheni soonyana bakaSirayeli inxalenye enye kokungamashumi amahlanu, ebantwini nakwizilwanyana zasekhaya, wakunika abaLevi,+ abagcine imbopheleleko+ yabo emnqubeni kaYehova, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 48 Asondela kuMoses amadoda amiselweyo amawaka omkhosi,+ iintloko zamawaka neentloko zamakhulu,+ 49 athi kuMoses: “Abakhonzi bakho balibalile inani lamadoda emfazwe aphethwe sithi yaye akukho nanye ekubikwe ukuba ayikho kuthi.+ 50 Ngoko sivumele ukuba ngamnye kuthi asondeze oko akufumeneyo njengomnikelo kaYehova,+ impahla yegolide, imixhaka, nezacholo, nemisesane yokutywina,+ namacici, nezihombo zamabhinqa,+ ukuze sicamagushele imiphefumlo yethu phambi koYehova.” 51 Wayamkela ke uMoses noEleyazare umbingeleli igolide leyo kuwo,+ nawo onke amatye anqabileyo. 52 Iyonke igolide yomnikelo abayinikelayo kuYehova yaba ziishekele ezilishumi elinesithandathu lamawaka elinamakhulu asixhenxe anamashumi mahlanu, evela kwiintloko zamawaka nakwiintloko zamakhulu. 53 Amadoda awayephume umkhosi, nganye kuwo yayiziphangele.+ 54 Ngoko wayamkela uMoses noEleyazare umbingeleli igolide kwiintloko zamawaka nezamakhulu baza bayingenisa ententeni yokuhlangana njengesikhumbuzo+ soonyana bakaSirayeli phambi koYehova.